Amagama angukhiye, imvamisa yokuqukethwe ne-SEO
Ukubaluleka kokuqukethwe okusha kwe-SEO
NgoLwesine, Novemba 10, 2011 NgoLwesine, July 18, 2013 Douglas Karr
Ngitshele abantu isikhathi eside ukuthi isisho esidala sokumaketha sisebenza nakokuqukethwe. Ukubheka, ukuvama kanye nenani lokuqukethwe kuyisihluthulelo. Yingakho ibhulogi kuyisihluthulelo samasu wokumaketha okuqukethwe… ikuvumela ukuthi ubhale kaningi. Ishadi elingezansi livela kwelinye lamakhasimende ethu. Senze ngcono indawo yabo futhi, ngokuhlanganiswa nokukhuthazwa okungekho esizeni, bakhuphukela emazingeni athile ancintisana kakhulu.
Kodwa-ke, ngemuva kwezinyanga ezimbalwa ukuthola okuqukethwe okusha ngamagama asemqoka ahlukahlukene kwakunzima. Ithimba elibhala okuqukethwe belimatasa kakhulu ngakho-ke sibaqashele umbhali wokuqukethwe. Ngenkathi inkampani igxile kumkhiqizo wayo nasezindabeni zayo, umbhali wethu wamakhophi wagxila kuzeluleko ezijwayelekile nemikhuba emihle yomkhakha. Simane sanikeza izihloko eziningi ngamagama asemqoka angatholakali, futhi voilà!
Ishadi lisuka ku- Semrush, ebamba izizinda ezisezingeni eliphakeme kumagama angukhiye wezigidi ezingama-60. Leli klayenti alikhulisanga nje kuphela inani lamagama angukhiye abeliwo usezingeni le-, baphinde bathuthukisa nezinga labo eliphelele. Ungavumeli isayithi lakho liphele ngokuqukethwe.
Ukuhlinzeka ngokuqukethwe kwakamuva, okuvame futhi okubalulekile ngeke kumane nje kuhambise ngokuvakasha, kuzosiza nokwenza ngcono injini yakho yokusesha!
Tags: Ukukhangisa OkuqukethweAmagama angukhiyeukusebenzisa ngokugcwele injiniseo
I-Google kuqhathaniswa ne-Facebook Kobumfihlo
Ukwamukelwa Komsebenzisi Kwe-Geosocial and Location-based
Nov 10, 2011 ngo-5: 51 PM
UDoug, kulungile, ingabe bekungukuqukethwe okukhulise ngokukhethekile amamethrikhi abo, noma izenzo abantu abazithathile lapho bebona okuqukethwe? Ngibuyiselwe ngokoqobo ngeposi lakho elithi “Izinombolo Zezinombolo” (https://martech.zone/numbers-matter/ ). 😉 UJohane
Nov 10, 2011 ngo-5: 54 PM
Kulokhu, bebengenakho okuqukethwe kwamanye amagama angukhiye obekufanele ngabe bakleliswe kuwo. Ngamafuphi, awukwazi ukubeka ezinhlanganisweni eziningi zamagama angukhiye ngaphandle kokuba namakhasi awashoyo! 🙂